Dị ka mmiri maka chocolate: Laura Esquivel's kacha ere ahịa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Dị ka mmiri maka Chocolate Ọ bụ akwụkwọ Mexico onye kacha dee akwụkwọ Laura Esquivel. Mgbe ebipụtara ya na 1989, ọ ghọrọ akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ mba ụwa. O bu akwukwo ohuru nke nwere otutu ihe anakpo. N’afọ 2001, akwụkwọ akụkọ ahụ Ụwa gụnyere akụkọ dị na "ndepụta nke akwụkwọ akụkọ 100 kachasị mma na Spanish na narị afọ nke iri abụọ."
Na ibé dabere na ndụ Tita, nwanyị bi n'etiti ịhụnanya na-agaghị ekwe omume na isi nri, na onye ga-agabiga ọtụtụ ihe isi ike iji rube isi na ọdịnala ezinụlọ. N'ihi akụkọ ihe mere eme, Esquivel bụ onye edemede mbụ si mba ọzọ nweta mmeri ABBY a ma ama, n’afọ 1994. Kemgbe e wepụtara ya ruo ugbu a, e reela ihe karịrị nde asaa, asụgharịakwala ya n’ihe karịrị asụsụ iri atọ.
1 Nchịkọta nke Dị ka Mmiri maka Chocolate (1989)
2 Nyocha nke mmiri dịka chocolate (1989)
2.2.1 Tita (Onye Joseph)
2.2.6 Ihe odide ndị ọzọ
3 Biofọdụ biographical data nke na-ede akwụkwọ Laura Esquivel
3.1 Pathzọ ọrụ
3.4 Akwụkwọ site na Laura Esquivel
Na nchikota nke Dị ka mmiri maka Chocolate (1989)
Nwa Josef - Ma ọ bụ Tita, dị ka onye ọ bụla maara ya— ọ bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụnne nwanyị atọ. Ọ bụ ngwaahịa nke njikọ dị n'etiti María Elena na Juan De la Garza. Kemgbe ọ nọ n'afọ nne ya - Mama Elena - enwere ike ịnụ ka ọ na-ebe ákwá, ọbụnadị n'ụbọchị amụrụ ya akabeghị n'etiti etiti kichin nke ụlọ ezinụlọ. Naanị ụbọchị abụọ, Tita bụ nna mgbei na nna ya wee tolite n'akụkụ onye isi nri nke ụlọ, Nacha.
Site na nwata, gburugburu ebe obibi n'ime ya eto na-eme ka ị hụ nka n'anya, nke o mezuru n'okpuru nkuzi Nacha. N’oge ọ dị afọ iri na ụma, Tita kpọọ oku n’ememe; Ebe ahụ zute Pedro, ha abụọ ha na-ahụ n'anya ke akpa anya. N'oge na-adịghị anya - site na mmetụta miri emi ya - nwa okorobịa a gara ụlọ De la Garza Ranch, kpebisie ike ịjụ Mamá Elena maka aka nke onye ọ hụrụ n'anya.
A jụrụ arịrịọ Pita, ka, dị ka omenala nke oge ahụ si dị, nwanne nne —N'ihi na ọ bụ ọdụdụ nwa nwanyị ọ ghaghi ịnọgide ilekọta nne ya n’agadi. Na counterproposal, Mamá Elena na-enye ya ohere ịlụ ọkpara ya: Rosaura. Na-atụghị anya ya, nwa okorobịa ahụ na-anabata ntinye, ebumnuche nke ịbịaru ịhụnanya nke ndụ ya nso.
Otu ụbọchị tupu alụmdi na nwunye ahụ, Nacha nwụrụ. Na consecuense, Tita ga-abụ osi ite ọhụrụ. Agbamakwụkwọ ahụ na-aga ebe Tita dara na mwute dị ukwuu, yabụ site na mbadamba ọ bụla ọ na-ebufe gị dịpụrụ adịpụ mmetụta.
Site na ebe a usoro nke ihe mere na, agbanyeghi na otutu mmadu gha atụ anya, ga-enwe ntụgharị na ntụgharị nke ga-eju ihe karịrị otu onye na-anụ ọkụ n'obi n'anya. Ọchịchọ, ihe mgbu, ara na omenala gbanyere mkpọrọgwụ nke oge, ha bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị ga-eweta akụkọ a na ndụ dabere na ịhụnanya "amachibidoro".
Nyocha nke Dị ka mmiri maka Chocolate (1989)
Dị ka mmiri maka Chocolate Ọ bụ pink akwụkwọ nwere akara anwansi akara. Aka na 272 peeji ma ekewa ya 12 isi. E debere ya n'ókèala Mexico, ọkachasị n'obodo Piedras Negras de Coahuila. Akụkọ a malitere na 1893 ma kpuchie afọ 41; ke ini oro Ntughari Mexico (1910-1917) onodu nke egosiputara na nkata.
N'ime ọrụ dị iche iche nke ọrụ ahụ, ọdee akwụkwọ ahụ ji ọnwa ole na ole nọ n’afọ ahụ nọchie anya ya, o jikwa aha nri ndị Mexico a na-ejikarị akpọrọ nke ọ bụla. Na mbido nkebi nke ọ bụla, a na-ekpughere ihe ndị mejupụtara ya, ebe akụkọ a na-apụta, a na-akọwa uzommeputa n'ụzọ zuru ezu. Onye ozo dere akwukwo a, onye edere aha ya na njedebe nke a.
Tita (Onye Joseph)
O bu onye mbu na akwukwo isi nke akwukwo, ọdụdụ nwa ada De la Garza na a enweghị nri. O nweela obi mgbawa nke enweghị ike ịnọnyere ịhụnanya nke ndụ ya, n'agbanyeghị na ha bi n'otu ụlọ. N'ịbụ onye nne ya na-asọ oyi, ọ ga-achọ ebe mgbaba na agụụ ọzọ ya, isi nri. N’ụzọ anwansi, ọ ga-egosipụta mmetụta ya site na usoro nri ya dị mma.
Ọ bụ nne Rosaura, Gertrudis na Tita. Ọ bụ ihe nwanyị nke siri ike, onye ọchịchị aka ike ma sie ike. Mgbe nwanyị ahụ nwụsịrị, ọ ga-abụrịrị onye isi ezinụlọ ma na-elekọta anụ ụlọ na ụmụ ya nwanyị niile.
Ọ bụ ngalaba-kpakpando nke akwụkwọ akụkọ ahụ; n'agbanyeghị na enweghị olileanya n'ịhụnanya Tita, O kpebiri ịlụ Rosaura iji nọrọ nso n'ịhụnanya ya. N'agbanyeghị oge na ọnọdụ, mmetụta ya maka Tita ga-adịgide.
Ọ bụ osi ite nke racho nke ezinụlọ De la Garza, na ndị, na mgbakwunye, na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ nke protagonist.
Ọ bụ ada mbụ nke di na nwunye De la Garza, nwa agbọghọ ụkpụrụ na omenala, onye ọ gha ịlụ Pedro site na iwu nke nne ya.
N’akụkọ ahụ dum akụkọ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe onye ga - akwụsị inye otu atụmatụ aka. N'ime ha anyị nwere ike ịkọwapụta: Gertrude (Nwanne Tita), Chencha (Nwa odibo na enyi Tita) na Jhon (dọkịta ezinụlọ).
Onye dere akwụkwọ lụrụ onye isi nduzi Alfonso Arau site na 1975 ruo 1995, nke a bụ Onye njikwa igosi mmegharị ihe nkiri nke akwụkwọ akụkọ. Laura n'onwe ya na-ahụ maka ide edemede ahụ maka ihe nkiri ahụ, site na nkwado nke di ya. Ihe nkiri a bụ ihe ịga nke ọma ebe ọ bụ na mmalite ya na 1992, yana mmepụta 100% Mexico, nyere ya onyinye 10 Ariel yana karịa nsụgharị 30.
Ihe nkiri a nọgidere bụrụ otu n'ime ihe nkiri sinima kasịnụ dị na Mexico ruo ọtụtụ iri afọ. A họpụtara ya maka onyinye dị mkpa, dị ka: Goya na Golden Globe awards na 1993. Mana ọ bụghị ihe niile bụ rosy: na 1995 onye ode akwụkwọ gbara akwụkwọ maka di ya gara aga ka ọ bịanye aka na ya (na Bekee) na akwụkwọ ịgba alụkwaghịm. hapụrụ ikike maka akwụkwọ akụkọ ahụ. N'ikpeazụ, onye edemede Mexico meriri ikpe ahụ.
Biofọdụ biographical data nke na-ede akwụkwọ Laura Esquivel
Onye edemede Laura Beatriz Esquivel Valdés mụrụ Cuauhtémoc (Mexico), na Satọdee Septemba 30, 1950. Ọ bụ nwa nwanyị nke atọ nke alụmdi na nwunye dị n'etiti Josefa Valdés na onye na-ede akwụkwọ akụkọ bụ Julio Esquivel. Na 1968, ọ gụsịrị akwụkwọ na Mmụta Nwatakịrịnakwa mụọ aterlọ ihe nkiri na Dramatic Creation na udi umuaka na CADAC (Mexico City).
Kemgbe afọ 1977, ọ bụ onye nkuzi n’ọgbakọ dị iche iche nkiri, akwukwọ nyocha na ede ederede, n'obodo dị iche iche Mexico na Spanish. Ruo afọ 10 (1970-1980) ọ dere edemede dị iche iche maka mmemme telivishọn Mexico maka ụmụaka. Na 1985, o mere ihe izizi ya na mpaghara ihe nkiri ihe nkiri site na okike nke edemede maka ihe nkiri: Chido Guán, The Golden Tacos.
Kemgbe afọ 2007 ọ banyere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị; mgbe otu afọ gachara, ọ bụ onye isi nchịkwa ọdịnala na Coyoacán ruo na 2011. Ọ bụ akụkụ nke Morena party (National Regeneration Movement), ya na nke hoputara na 2015 dika osote onye isi ochichi nke Congress nke Union na Mexico.
N’afọ 1989, o gosipụtara akwụkwọ akụkọ izizi ya nke akpọrọ Dị ka mmiri maka Chocolate. Followinggbaso ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ a, onye edemede dere akụkọ itoolu ọzọ site na 1995 ruo 2017, nke ndị na-esonụ guzo: Dị ka ngwa ngwa dị ka ọchịchọ (2001), Malinche (2005), Akwụkwọ akụkọ Tita (2016) y Oji m gara aga (2017); abụọ ndị ikpeazụ a mezue njem ahụ Dị ka mmiri maka Chocolate.
Akwụkwọ site na Laura Esquivel
Dị ka mmiri maka Chocolate (1989)
Akwụkwọ akụkọ Tita (2016)
Oji m gara aga (2017)
Iwu ịhụnanya (1995)
Akpachi anya (akụkọ) (1998)
Mmiri kpakpando (1999)
Akwụkwọ mmetụta (2000)
Dị ka ngwa ngwa dị ka ọchịchọ (2001)
Lupita nwere mmasị n'ịgba (2014)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya » Dị ka mmiri maka Chocolate